Indlela ulungiselele Outlook Express? Lo magazini singenzeka kunoma ubani ukubhekana ikhompyutha. Abantu abaningi abasebenzisa i-Windows uhlelo lokusebenza ukusetshenziswa ku-imeyili uthanda e-mail iklayenti Outlook Express, okuyinto likhona isethi ejwayelekile software OS ethandwa kakhulu emhlabeni.
Lula futhi elula kwi-Outlook Express isicelo uzokwazi ufunde ngokushesha ngisho Wabasaqalayo. Umbuzo wokuqala kakhulu ephakama kusukela imfundamakhwela umsebenzisi zohlelo - indlela wamisa Outlook Express.
Ngaphambi kokuhlela, qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho exhunywe kwi-Inthanethi, futhi ukusebenzisa lolu hlelo ngokusebenzisa "Qala". Khetha - "Izinhlelo", bese - «Outlook Expess».
Ku-window ungabona ukuthi liqukethe imikhakha emithathu: a sokusebenza yamathuluzi futhi imenyu - phezulu, "Amafolda" futhi 'Oxhumana nabo "- ngakwesokunxele.
Indlela ulungiselele Outlook Express ngesandla noma ngokuzenzakalelayo? Kungcono ukukhetha ukucushwa manual, ngakho miss nganoma imiphi imininingwane ingase indiva ngokuzenzakalela Tuning.
Dala i-akhawunti. Esikhathini imenyu, thola "Amasevisi", chofoza "User Accounts" kusukela iconsi iphaneli chofoza ku "Engeza" ohlwini evelayo, khetha umugqa "Imeyili". Izobonisa iwindi "Uxhumano Iseluleki", okuyinto uyalwe faka igama, ezizobonakala ku "umthumeli" lapho ukuthumela ama-imeyili.
Indlela ulungiselele Outlook Express, futhi ukuthola ikheli kanye iseva aphumayo yemeyili engenayo? Ngesikhathi sigaba esilandelayo singena ikheli leposi le-elekhthronikhi bese uchofoze "Okulandelayo". Lokhu kuvula ifasitela lapho kudingeka ukhethe iseva ye-imeyili. Imeyili - POP3. Ngezansi, ubheke amasimi lapho ufuna ukufaka leseva engenayo (pop3.mail.ru) kanye aphumayo (smtp.mail.ru), kanye futhi uchofoze "Okulandelayo". amakheli Server ingatholakala uhlelo lakho le-imeyili (imeyili, Yandex, njll ..) Ngokuchofoza ukhetho "Usizo."
Manje faka ikheli lakho le-imeyili nephasiwedi. Ngokukhethekile, ungakwazi abeke uphawu ngesheke eceleni iphuzu "Khumbula iphasiwedi", uhlelo ungacelanga ngaphezulu uma uxhuma kwiseva.
Ngemva Ngokuchofoza "Okulandelayo" kufanele ubone umlayezo ukuthi imeyili lulungiswe ngempumelelo. Khona-ke kufanele uvala iwindi "Uxhumano Iseluleki" ngokuchofoza inkinobho ka- "Qedile". Kwabe sekuvela ukuthi, impela nje ukumisa i-Outlook.
Imeyili izinhlelo ngezinhloso zokuphepha, njengoba umthetho, ukucela igama ebhokisini nephasiwedi lapho ukuthumela nokwamukela ama-imeyli. Ukulungisa le ndlela, khetha iwindi e-akhawunti entsha, akhethe okuhle ikholomu "Properties". Ivula ewindini lapho ngokuchofoza kuthebhu "amaseva" futhi uhlole ibhokisi eceleni "isheke Umsebenzisi" amaphuzu. Khona-ke udinga chofoza "Izilungiselelo" futhi uqinisekise ukuthi eduze umugqa "Indlela imeyli yeseva engenayo" bhokisi ulithola, bese uklikha OK.
Kwakungenxa mayelana nendlela ukumisa Outlook Express. Ukusetha manje kuphelile futhi ungaqala umsebenzi Uhlelo lakho le-imeyili.
Ungasetha izilungiselelo ezithuthukile. Uma sibheka imenyu, ungabona amathebhu eziningana.
Esikhathini "Ifayela" menu ukwenza noma yimaphi amasethingi akudingekile - zonke izenzo kwenziwe amabhokisi engxoxo.
"Hlela" ikuvumela ukuba uphathe imilayezo imiyalo.
Esikhathini "Buka" ukumisa imenyu esibonakalayo wenziwa.
Futhi ekugcineni, ithebhu "Amathuluzi" - ". Umlayezo Imithetho" Chofoza le "Imithetho iposi" bese inkinobho "Yakha" - lapha setha ukuhlunga imiyalezo engenayo. Njengomthetho, uhlelo ngokuzenzakalela amabhlogo ama-imeyli asolisayo wayewaqondisa kufolda ugaxekile. Umsebenzisi unethuba ukudala isihlungi yakho siqu elinganiselwe Ukuvinjwa amakhono. Kulokhu, ungakwazi ukwenqaba imeyili amakheli eside futhi asikho isihloko.
Bese uya ithebhu «Windows-Messenger», vula "Izinketho" futhi susa ezimakwe nge umkhaza abomvu. Iqiniso lokuthi Windows Messenger iphuzu obuthakathaka yesistimu yokusebenza mayelana nokuphepha, ngakho udinga uzivikele ngangokunokwenzeka futhi zihlanganisa isicelo, bafakwe OS, uma kudingeka kuphela.
Qhubekisa ngokuthwebula "Izilungiselelo" iwindi, lapho eziningi amathebhu, futhi ungakhetha tincture ngendlela esilindele yakho. Kuwufanele kokusho amazwi ambalwa mayelana nokuvikeleka - it is hhayi Kunconywa ukususa imikhaza ne mshini abomvu.
Ngakho, ukumisa Outlook Express umsebenzisi Ngokwesilinganiso, udinga ukukhetha imizuzu embalwa nje.
Iphutha 651 e-Windows 7: Kuyini lokhu?